Apple wuxuu sii daayaa tvOS 9.2.2 beta 5 iyo OS X 10.11.6 beta 5 | Wararka IPhone
Shalay waxay ahayd galab cusub (berri xarunta xannibaadda) kuwa ay Apple ku soo bandhigeyso betas cusub. Markan wuxuu bilaabay a beta cusub ee macruufka 9.3.3, tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6, Noocyada soo socda ee nidaamyada hawlgalka ee jiilka afraad ee Apple TV iyo Macs shanaad beta labada nidaam ee hawlgalka waxaa la soo saaray usbuuc uun ka dib markii la bilaabay beta-kii afraad waxaana la heli karaa ilaa shalay iyada oo loo marayo kanaalkeeda caadiga ah.
Sida beta-ka shanaad ee iOS 9.3.3, beta 5 ee tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6 kuma jiraan warar caan ah oo laga hadlayo. Markii si rasmi ah loo sii daayo, dhammaan noocyada cusub ayaa la imaan doona hagaajin yar, kaas oo raadin doona inuu hagaajiyo nidaamka kana takhaluso cilladaha yaryar ee la ogaaday tan iyo markii la sii daayay tvOS 9.2.1 iyo OS X 10.11.5. Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii ay hagaajiso dareenkeenna, waxaa ku jiri doona kuwa ugu wanaagsan ugubadda ah.
Beta cusub ee tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6. Ka warran watchOS?
Ka dib markii la sii daayay betaskan cusub, mid ayaa ka maqan watchOS. Haddii aanan khaldamin, oo aan fiirinayo feylka, kaliya a oo yimid 6-dii Juun ee betaskii labaad ee tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6. Maxay Apple ugu fududeyneysaa nidaamka qalliinka ee loogu talagalay Apple Watch? Suurtagal maaha in la ogaado, laakiin adeegsadayaal badan ayaa sidaa leh watchOS 3.0 Waxay ahayd kii ugu fiicnaa ee ay soo bandhigeen WWDC-dii ugu dambeysay waxayna umuuqataa in Apple aysan fiiro gaar ah siineynin daawashada 2.x oo kaliya waxay rabtaa inay diirada saarto nooca soo socda ee imaan doona waqti ka dib xagaaga, laga yaabee inuu kudhowyahay iOS 10.0 iyo tvOS 10.0 . Haddii khariidadda sannadihii la soo dhaafay la raaco, macOS Sierra waa inuu yimaadaa Oktoobar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple tv » Apple wuxuu sii daayaa tvOS 9.2.2 beta 5 iyo OS X 10.11.6 beta 5